musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Jet2 inoraira 15 nyowani A321neo ndege
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Investments • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • Technology • kutakura • Kufamba Wire Nhau • UK Kuputsa Nhau
Ndege nyowani dzinogadzirirwa zvigaro makumi maviri nezvitatu pamwe neAsppace kabhini ine mwenje unovhenekwa, zvigadzirwa zvekugara zvitsva uye makumi matanhatu muzana muzana pamusoro pemidziyo yemabhangi yekuchengetedza wega.
Oda nyowani inotora iyo yakazara odha neLeeds, United Kingdom, yakavakirwa ndege kune 51 A321neos.
Iwo maviri maodha emahara anoratidza Jet2.com's ambitious fleet kuwedzera nekuvandudza zvirongwa zvaro.
Ndege nyowani ichagadzirirwa zvigaro makumi maviri nezviviri nemweya weAirpace ine magetsi matsva.
Jet2.com yaisa imwe odha ye15 A321neos zvichitevera yayo yekutanga makumi matatu yakaiswa muna Nyamavhuvhu 36. Zvinotora odha yakazara neLeeds, United Kingdom, nendege yakamisikidzwa ku2021 A51neos. Iwo maodhi maviri anoratidza Jet2.com's chinzvimbo chekuwedzera zvikepe uye zvirongwa zvekuvandudza. Injini yekusarudzwa ichaitwa pane inotevera zuva.
New Jet2.com ndege ichagadzirirwa zvigaro makumi maviri nezviviri makumi maviri nemaviri neAirpace kabhini ine mwenje unovandudzwa, zvigadzirwa zvekugara zvitsva uye makumi matanhatu muzana pabhodhi yepamusoro yezvikwama zvekuchengetedza wega.
Iyo A320neo Mhuri inosanganisa matekinoroji azvino uno, anosanganisira matsva enjini uye maSharklets, achiendesa 20 muzana kudzikiswa kwemafuta ekushandisa pachigaro. Iine imwezve yekuwedzera inosvika mazana mashanu nautical mamaira / 500 km. kana matani maviri ekuwedzera kubhadhara, iyo A900neo ichaendesa Jet321.com iine mari yekuwedzera.
Pakupera kwaNyamavhuvhu 2021, iyo A320neo Mhuri yakanga yahwina pamusoro pe7,500 maodha akasimba kubva kune vanopfuura zana nevatengi pasi rese.
Jet2.com Yakatemerwa, inozivikanwawo saJet2, ndeyeBritish yakachipa-inodhura ndege yekuzorora inopa yakatarwa uye charter ndege kubva kuUnited Kingdom. Kubva muna2019, ndiyo yechitatu-huru ndege yakatarwa muUK, kuseri kweEasyJet neBritish Airways.
Mhuri yeAirbus A320neo kusimudzira yemhuri yeA320 yendege-nendege nendege inogadzirwa neAirbus. Mhuri yeA320neo yakavakirwa pane yapfuura A319, A320 uye A321, iyo yakapihwa zita rekuti A320ceo, ye "ikozvino injini sarudzo".